Ukufudumala kwamafasitela nezindonga ngaphambi ebusika
Ebusika, uma uvela emgwaqweni, ubanda futhi ubanda, ufuna ukungena endlini efudumele egcwele induduzo. Izitshalo zaseSiberia zihlukumezeka kakhulu, futhi ungazizwa ngaphandle kokuphuma, ngenxa yesizathu esivamile sokuthi ukugxila ezindlini esihlala kuzo ngaphansi kweNyunyana YaseRussia kubuthakathaka, futhi izinhlelo zokushisa zivele zingenakusetshenziswa.
AbaseRussia abaningi bayazi kahle imidwebo, behamba bezungeza indlu, iqhwa kumafasitela kanye naphakathi kwamafasitela, amafasitela agcwele amaqhwa. Ngisho nesithwathwa esilinganiselwe, izinga lokushisa emakhaya lifinyelela kuphela +15 degrees, ngakho konke lokhu okushisa okuphakathi kusasebenza. Ekugcineni, yiziphi amaRussia anezikhuhlane eziningi.
Ukwehliswa okuncane kwezakhiwo zokuhlala akulimazi nje kuphela impilo yabantu, futhi ngokungajabulisi "kushaya" isikhwama, ngoba sivame ukusebenzisa usizo lwamagesi okushisa kagesi, futhi uma sithola izikweletu kagesi, "thatha ikhanda." Ngakho-ke, abantu kudingeka bathathe izindlu zabo ngokuzimela, futhi yikuphi indlela, kufanele sizikhethele thina: ukusebenzisa usizo lwezinto ezintsha noma ukusebenzisa izindlela zakudala. Ake sicabangele izindlela eziyisisekelo. Ukushisa kwe-2/3 kusuka ekamelweni kudlula kumafasitela, ukuze, ekuqaleni, uqale ngokufakwa kwamafasitela.
Izibalo zibonisa ukuthi cishe njalo ezindlini futhi kuze kube yilolu suku, zikhona amafenisha amadala amapulangwe ane-glazing efanayo. Izakhiwo zezinkuni, ngokuhamba kwesikhathi, ziqala ukuguqula izinguquko zokushisa nokushintsha isimo. Ngenxa yalezi zizathu, kunezikhala phakathi kwamafenisha amafasitela, kusetshenziswa ukulahlekelwa kokushisa futhi umoya obandayo ungena kalula. Izitshalo zibonakala zingenalutho, kodwa noma ngabe ubukhulu bazo buyi-2 mm ngaphesheya kwefasitela lonke, lokhu kufana nengalo ye-10 cm. Amafasitela endala, uma ekhubazekile, kudingeka afakwe uphawu emagumbini ngama-angles ensimbi. Okungukuthi, wenza amancane ama-skews namafasitela we-sash azovala umcibisholo. Esinye isinyathelo ukuguqula amaphrofayili endala kumasha, ukuze kugcinwe izigesi ezibucayi futhi ususe ama-slits ne-silicone sealant.
Ukuze ufihle imifantu emkhatsini wodonga nesakhiwo, uphawu lwe-acrylic noma uphawu lokungena amanzi lungcono. Abantu abaningi bayazi ukuthi bangayilahla kanjani imigwaqo phakathi kwefreyimu yewindi kanye nama-flaps ayo. Kunezindlela eziningi. Ungathatha amafasitela amafasitela noma i-rejista ye-cash register, ungasebenzisa futhi i-tape yepende noma u-honey plaster. Lezi zindlela ngandlela-thile zinganciphisa kuphela izikhwama, kodwa ekuqaleni kwentwasahlobo, uzozihlanganisa, ususe amafasitela azo zonke izinqubo kanye ne-putty.
Okulula kakhulu futhi okuphumelelayo kulokhu kuyisimiso sokushisa sanamuhla (i-raber i-foam, i-polyurethane, i-raber). Izinto ze-polymer, ezenziwe ngendlela yamaphrofayela we-tubular, iyona enokwethenjelwa kakhulu. Zivele zifakwe phakathi kwe-flaps kanye nefreyimu, ngakho konke lokhu kuhlanganisa kakhulu isakhiwo, kahle, ngokukhipha kwalesi sihloko ngeke kube nezinkinga. Ngokusho kwemizwa yabanikazi, bangakhetha okungenani iphalethi ethile yombala. Indlela engcono kakhulu, okuyiyo, kuyoba ukushintsha amawindi amadala kuya kwanamuhla, uzozisindisa kusuka ku-overspray njalo.
Kusobala ukuthi lo mnandi awushibhile, kodwa kulokhu amafasitela azokuvumela ukuba uphumule emfudumeni nasenduduzo iminyaka eminingi. Okulandelayo kanye namafasitela epulasitiki - angeke adinge ukudwetshwa, futhi amafenisha amafasitela angeke ame. Ukonga okwengeziwe kwamandla kungatholakala ngokufaka ama-roller shutters emafasiteleni. Ngentambama bangase bahlungwe, futhi ebusuku ungakwazi ukusabalalisa ukugcina ukushisa endlini. Futhi-ke, uma ifulethini likhona i-loggia noma i-balcony, kumele ibe yi-glazed.
Izindawo ezihlala "Khrushchev" zivame ukuba nezindonga ezingenalutho futhi zincane kakhulu. Bavele bedinga ukuthungwa okungeziwe. Lokhu kubaluleke kakhulu emakamelweni ekona, lapho udonga olulodwa luphuma khona ngaphandle. Akuvamile ukuthi amacumbi kuleli kamelo aqinile kakhulu futhi aqaphele futhi agxumeke kuwo futhi kukhona isikhala nesibumba njalo. Kulezi zimo, udinga ukushisa kwegumbi ngaphakathi. Kulolu donga kukhona izingodo ezihleliwe, ezenziwe ngamapulangwe noma iphrofayli ehlanganisiwe, phakathi kwawo kufakwe izinto zokushisa ezishisayo, ezinomzimba okungenani ama-50 mm.
Ungasebenzisa amapulethi noma amashidi okwenziwa ngoboya bamaminerali, kulokhu, ukushisa okushisa okuvela eceleni kwegumbi kumele kuhlanganiswe nezingxenye ezintathu zefilimu ye-polyethylene, ene-giant-barrier barrier. Lokhu kudingekile ukuze ungagcini amanzi emzimbeni ngokwawo. Uma amabhodi e-styrofoam kufanele asetshenziswe, umkhawulo womoya awufanele usetshenziswe. I-Penoprostyrene ivalwe kalula ngamashidi we-particleboard, ibhodi ye-gypsum noma i-fiberboard, kuyo ungenza cishe noma yikuphi ukuhlobisa - ukunamathisela iphephadonga noma ukudweba. Ngokuvamile, usebenzisa le ndlela, indawo yegumbi izokwehla kancane, kodwa isimo sezulu sendawo kuzo zonke izakhamuzi zefulethini kuzoba ngcono nakakhulu.
Indlu ekhaya: indlela yokuhlala nayo, indlela yokuphila ngaphandle kwayo
Indlela nokuthi yini yokugeza i-microwave ngendlela efanele
Izikhumbuzo ezinhle nezipho zoNyaka Omusha
Ziyini, izimpawu zobuthi?
Umthetho wendlela yokugqoka u-tie
Siyakuhalalisela ngosuku lokuzalwa kwentombi yakho
Imizwelo engenakuqonda ingakwazi futhi ilawulwe
Kuthiwani uma umfana engaphenduli ucingo?
Kungani ingane kufanele ilale ngokwahlukana nabazali
Inkabi nama-mushroom e-sauce
Izindlela zokuzivocavoca zomzimba wangaphakathi wethanga
Ukwehluleka kwezindonga zesisu - ukuvivinya umzimba ukuqinisa
Iyiphi indima i-zinc edlala emzimbeni womuntu?
UBen Affleck noJennifer Garner bamemezele ngokusemthethweni isehlukaniso
Izinhlobo zezitshalo zokuhlobisa
I-placenta yabantu - isakhiwo, intuthuko, umsebenzi
Isikhathi sokulala komuntu omdala
Isifo senhliziyo esibangelwa yinhliziyo emntwaneni
Isaladi elimnandi ngamakhowe
Ukunciphisa amafutha abalulekile, ukujwayela
Ukuzilibazisa okungavamile kwamantombazane
Ukuhamba ... i-France ... i-Paris
Penne nge isanqante sauce
Izitshalo zasekhaya: ukunakekela i-hippeastrum
© 2021 zu.inditics.com